ताराको ‘बल्छी’मा के पर्यो ? (भिडियो) « Mazzako Online
ताराको ‘बल्छी’मा के पर्यो ? (भिडियो)
गायक तारा लक्सम लिम्बुले ‘बल्छी’ नामको एल्बम निकालेका छन् । एल्बमको शीर्ष गीतको भिडियो उनले भर्खरै युट्युबबाट सार्वजनिक गरेका छन् । भिडियो सार्वजनिक गर्दै एल्बम ‘बल्छी’ सबै उमेर समुहका स्रोतको लागि तयार पारेको बताएका छन् । ‘बल्छी’ उनको तेस्रो एल्बम हो । यसअघि उनले ‘माया छ्यास्छ्यास्ती’, ‘मखमली चोली’ लगायतका एल्बमबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाईसकेका छन् ।
एल्बम ‘बल्छी’मा रहेको शीर्ष गीतको भिडियोबाट उनले निकै राम्रो तारिफ पाएको मज्जाको अनलाईनसँग बताएका छन् । दोस्रो ‘नेपाली तारा’का फष्र्ट रनरअप रहेका लक्समको नयाँ गीति भिडियोमा पुष्प र बर्षा राउतले अभिनय गरेका छन् । ‘ताराजी बल्छीमा के पर्यो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने, ‘हा हा हा बल्छीमा दर्शक स्रोताको माया पर्दैछ’ । गीतमा शब्द संगीत जनम राईको छ भने भिडियोको निर्देशन पनि उनले नै गरेका हुन् ।
यसपाली निकालेको नयाँ एल्बम ‘बल्छी’मा उनले ६ वटा गीत समेटेका छन् । ब्ल्याक लाईट इन्टरटेन्मेन्टको प्रस्तुती रहेको एल्बम ‘बल्छी’मा ताराप्रकास लिम्बु, स्पन्दन स्वरहाङ्ग राई, रज्जु लक्समको संगीत रहेको छ भने शब्द रमेश कोईराला, यमन सुवेदी लगायतको छ । शीर्ष गीत ‘बल्छी’बाट पाएको प्रतिक्रियाले गर्दा यतिबेला तारा एल्बमको अर्को गीत ‘मन्दिर गए’ को भिडियो बनाउन तम्सिएका छन् ।